၁။ ဘွဲ့- အရှင်ပါရမီ
၂။ အသက်-(၄၁)နှစ်၊ သိက္ခာ(၂၁)၀ါ
၃။ မွေးသက္ကရာဇ်-၁၃၃၂-ခုနှစ်၊ ၀ါဆိုလဆန်း(၆)ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့၊ ၁၉၇၀-ခုနှစ်၊ ဂျူလိုင်(၉)ရက်
၄။ ဇာတိ- အင်ပင်ရွာ၊ ငှက်ပျောခြံကျေးရွာအုပ်စု၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း
၅။ မိဘ- ဦးဟန်ပို+ဒေါ်ခင်မိ၊ အင်ပင်ရွာ
၆။ ရဟန်းဒါယကာ- တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဥတ္တမသာရ၊ လုံပီးရွာ၊ ဖလမ်းမြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်
၇။ ရဟန်းဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ- ဦးသုတေသန၊ ရွှေတောင်ရွာ၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း
၈။ (၂၇-၀၆-၂၀၀၉) ရက်နေ့တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်မှ ဒေါက်တာဘွဲ့ကို အပ်နှင်းခြင်းခံရသည်။
၉။ ပညာအရည်အချင်း – သာသနတက္ကသီလဓမ္မာစရိယ၊ သာသနတက္ကသီလ မဟာဓမ္မာစရိယ၊ B.A. (Buddhism), M.A. (Buddhism) (MDY), PhD (ITBM University), PhD (Thesis) (University of Mumbai)
၁၀။ အလုပ်အကိုင်- လက်ထောက်ကထိက၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
၁၁။ အမြဲသီတင်းသုံးရာဌာန- မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာ၊ ရတနာကျွန်း၊ သုနန္ဒာလမ်းမကြီး၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
၁၂။ လက်ရှိသီတင်းသုံးရာဌာန- Vijay Nagar, New Delhi
၁၃။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်- 00918527104425 (လက်ရှိ)
၁၄။ အီးမေး – drvparami@gmail.com
၁၅။ ပညာသင်ကြားခဲ့သောကျောင်းတိုက်များ- နိရုတ္တိရံသီကျောင်း၊ မြို့မရွှေဂူတိုက်၊ မုံရွာမြို့။ ဓမ္မဂါရ၀ကျောင်း၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ မန္တလေးမြို့။ နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ မန္တလေးမြို့။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ K.J. Somaiya Centre for Buddhist Studies, University of Mumbai, India.
၁၆။ သာသနာရေးဆောင်ရွက်ချက်များ- မန္တလေးမြို့၊ နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့ တက္ကသိုလ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာနည်းပြအဖြစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓ သာသနာပြုတက္ကသိုလ်တွင် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအား စာသင်ကြားပြသ ပေးလျက်ရှိခြင်း၊ မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာ၌ ပဓာနနာယကဆရာတော် အဖြစ်ဖြင့် တရားဓမ္မများကို ဟောကြားပြသပေးလျက်ရှိခြင်း၊ ရွှေအင်ပင်ဆရာတော်အမည်ဖြင့် နယ်လှည့်တရားပွဲများကိုလည်း လက်ခံဟောကြား ပေးလျက်ရှိခြင်း၊ မြကျွန်းသာမိုးကုတ် ၀ိပဿနာဓမ္မရိပ်သာ၌ ၀ါတွင်းကာလ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်းများကို ပို့ချပေးလျက်ရှိခြင်း၊ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် မိမိရိပ်သာ၌ပင် ကလေးငယ်တို့အား ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးခြင်း၊ ဘာသာရေးစာပေ၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာများကိုလည်း အခါအားလျော်စွာရေးသားခြင်း၊ ယခုလက်ရှိတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ ဒေလီတက္ကသိုလ်တွင် ICCR အဖွဲ့၏ ပင့်ဖိတ်ချက်အရ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ပြုလုက်လျက်ရှိခြင်း
၁၇။ (၀၈-၀၇-၂၀၀၉) ရက်နေ့တွင် မြကျွန်းသာလူမျိုးစုပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ၀ိမလဗုဒ္ဓိမှ ကျောင်းတိုက်ကြီးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်လွဲအပ်ခြင်းခံရ၍ မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာစတင်ထူထောင်ကာ ရိပ်သာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အဦများကို ကျောင်းဒါယကာ ကျောင်းဒါယိကာမများဖြစ်ကြသော ဦးလှကြည်+ ဒေါ်အေးအေးသွယ်မိသားစု တို့နှင့်ပူးတွဲတိုင်ပင်ကာ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။